MRB yekutengesa traffic counter yevatengesi vanhu kuverenga HPC002
Vanhu Kuverenga Sisitimu
Vanhu Kuverenga Kamera
Kugara Kuverenga Sensor
MRB vanhu vanoverenga kamera HPC008
MRB AI Motokari kuverenga system HPC199
MRB otomatiki Passenger Kuverenga Sisitimu yebhazi HPC088
MRB isina waya Vanhu vanopokana HPC005
MRB wifi tsoka inopesana HPC015S
MRB Door vanhu vanopokana HPC001
MRB ESL mutengo tag system HL290
MRB ESL zvishongedzo
Ichi chi chitoro chemotokariiyo inogona kupihwa simba neese mabhatiri uye simba. Vazhinji vedu chitoro chemotokari zviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yeduchitoro chemotokari.
Huwandu hwevapfuuri kuyerera ndicho chakakosha chiratidzo chechitoro mashandiro mumusika. Mukushanda kwemazuva ese, isu tinogona kutonga zvakananga mhando yemabasa ezvitoro mumusika kubva kuvatengesi vanhu vachiverenga data, nekuda kwekushambadzira kwechitoro, chiyero chekutengesa uye zvimwe zvekutengesa Iyo data inoenderana nenhamba yeicho chaicho-nguva yevatakuri inoyerera, zvinoreva kuti chete kana vatengesi vanhu vachiverenga dhata inowedzera, kutendeuka kwechitoro chemusika kuchawedzera, saka HPC002 chitoro chemotokari inobatsira chitoro kugadzirisa iyo vatengesi vanhu vachiverenga dambudziko.
Iyo HPC002 chitoro chemotokariinogona kuverenga huwandu hwevanhu vanopinda nekubuda muchitoro panguva dzakasiyana. Iyo idiki muhukuru uye nyore kuisa. Izvo hazvidi chero wiring uye kuvaka. Inogona kuve nyore kuiswa neako kushandisa iyovatengesi vanhu vachiverenga. Mutumbi unouya neiyo LED LCD inoratidzira. Unogona kuona vatengesi vanhu vachiverenga data chero nguva uye chero kupi. . Izvo zvinouyawo neyakaiswa floppy disk, iri nyore pakuona dhata uye kuongorora pakombuta notibhuku, uye inogona kutumira kunze zvakachengetwa vatengesi vanhu vachiverengadata. Dual mashandiro ebhatiri simba. Mutengo weHPC002chitoro chemotokari yakachipa pane zvimwe zvigadzirwa zviri pamusika, uye icho mutengo unodhura-unoshanda kune vatengesi vanhu vachiverenga.
Zvimiro zveHPC002 yekutengesa traffic counter
Zvakareruka uye zvisingaremi, 1.15 inches bhuruu LCD inoratidzira yakajeka.
Kuverenga nguva kunogona kusvika 0,8 metres - 4 metres.
HPC002 chitoro chemotokari inogona kushanda mumitauro miviri (Chirungu / Chinese).
Iyo yekumusoro ndangariro inogona kuchengeta inosvika mazana mashanu mameseji (akaverengerwa kamwe paawa).
LED chiratidzo chinoratidza yakaderera bhatiri yambiro.
Kuverenga data kunoratidzwa pane desktop yeiyo pakaunda panguva vatengesi vanhu vachiverenga.
Simba-yekuchengetedza modhi basa, magetsi ekuwedzera hupenyu hwebhatiri, anogona kuona bhatiri uye simba mashandisiro maviri.
Iyo yekumashure yeLCD yemvura yekristaro inoratidza inogona kugadziridzwa uye inovhura kana kudzima kana mumwe munhu apfuura.
HPC002 chitoro chemotokari ine keyboard yekukiya basa kudzivirira kusagadzikana.
Gadziridza iyo data awa rega, tora iyo data kune komputa kuburikidza neiyo USB interface.
Mushini rekodhi mubvunzo uye rekodhi data kujekesa basa.
Kana kuratidzwa kweHPC002 chitoro chemotokari haina chiratidzo, iyo skrini inokurumidza kupa yambiro.
Tine mhando dzakawanda dze IR chitoro chemotokari, 2D, 3D, AI chitoro chemotokari, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo chitoro chemotokari zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB Door vanhu vanopokana HPC001
Zvadaro: MRB USB yekuverenga kwevanhu muchina wekutengesa HPC015U
Infrared Beam Counter Vanhu
Michini Beam Counters
Infrared Beam Vanhu Vanoverenga
Infrared Beam Vanhu Kupikisa
MRB isina waya yedhijitari vanhu vanopokana HPC005U
MRB USB yekuverenga kwevanhu muchina wekutengesa HPC015U
MRB otomatiki vanhu vanopokana HPC005S
Zvigadzirwa edu aivigirwa kunyika dzinopfuura zana uye kumatunhu kumba uye kunze. Nekusimbiswa kwakasimba kwevatengi vedu, MRB yakafambira mberi zvikuru.
Adress: Kamuri 818-820, kuvaka B, St. NOAH, No. 1759, Jinshajiang Road, Putuo Dunhu, Shanghai, China.
Runhare: + 86-21-52353905